म्यूजिक खबर अवार्डको ८ औं संस्करण कसलाई कुन अवार्ड ? नामावली सहित | म्यूजिक खबर अवार्डको ८ औं संस्करण कसलाई कुन अवार्ड ? नामावली सहित – हिपमत
म्यूजिक खबर अवार्डको ८ औं संस्करण कसलाई कुन अवार्ड ? नामावली सहित
शुभकामना मिडिया सोलुशनको आयोजनामा हुन लागेको यो अवार्डलाई यो भन्दा पहिला म्यूजिक खबर डटकमले आयोजना गर्दै आएको थियो । यस वर्षबाट शुभकामना मिडिया सोलुशन (एसके मिडिया) ले सम्पूर्ण व्यवस्थापनसहित आयोजना गर्ने भएको छ । विभिन्न ४० विधामा आयोजना हुने यस अवार्ड गीतसंगीत क्षेत्रमा विशेष चासोको विषय बन्ने गरेको छ । यस अवार्डमा राष्ट्रिय भावको गीत, चलचित्र, आधुनिक, लोक दोहोरी, लोकगीत, पप, गजल, कल्चरल गीतहरु समावेश गरिने छ । अवार्डमा गायक गायिका, रचनाकार, संगीतकार, एरेन्जर, ध्वनि सम्पादक, भिडियो निर्देशक, छायाँकार, सम्पादक, उत्कृष्ट गीत लगायतका विविध विधाहरुमा अवार्ड आयोजना गरिने बताइएको छ । म्यूजिक खबर म्यूजिक अवार्डको अवसरमा प्रदान गरिने सम्मानहरु निम्न रहेका छन् ।